Neighbour states fearfully await knock-on effect - Telegraph
ZIMBABWE'S African neighbours were closely monitoring the country's parliamentary elections last night, aware that whatever the outcome it will have a major impact on the whole region.
The Pretoria-based Africa Institute said: "Never before has an African nation's election been watched so acutely by its neighbours. The stakes for the entire sub-continent are extremely high." Each bulletin from Harare was being analysed nervously from the military bases in the war-torn Great Lakes region to the panelled boardrooms of Johannesburg's economic powerhouse.
South Africa, Zimbabwe's major trading partner, has already registered the adverse impact of the violence which preceded the elections. The value of the rand has weakened considerably while many potential overseas investors have cancelled or postponed deals because of the perception of regional instability. President Thabo Mbeki's ultra-cautious diplomatic approach to Zimbabwe's problems has led to political trouble in South Africa and a marked sharpening of racial tensions.
Senior officials of the ruling African National Congress have hailed President Mugabe's approach to the question of land ownership as "pragmatic" while radical black groups such as the Pan-Africanist Congress have called for the occupation of white-owned South African farms by the "deprived and oppressed masses". Mr Mbeki, under pressure from opposition MPs, has given repeated assurances that there will be no Zimbabwe-style land grab but his government has felt obliged to announce an acceleration of land redistribution policies, unnerving already beleaguered white farmers and landowners.
If Mr Mugabe's grip on power is seen in any way to be endorsed by a large proportion of Zimbabwe's voters, the pressure on the ANC government to take a more militant line on white land ownership may increase. The South African government fears that a strong showing by the opposition Movement for Democratic Change could precipitate a constitutional crisis in Zimbabwe, possibly leading to further violence and instability which would spill inevitably into South Africa.
Botswana, which shares an extended border with Zimbabwe, has also experienced a sharp decrease in tourist bookings and an influx of refugees from Matabeleland. One Botswana government official said: "We are envious of our reputation as the most peaceful and prosperous democracy in Africa but I'm afraid it is a case of guilt by association."
The beleaguered President Laurent Kabila of the Democratic Republic of the Congo manifested his own anxiety about events in Zimbabwe by making a hasty flying visit to Harare in the middle of voting at the weekend. He sought and gained assurances from Mr Mugabe that the 11,000 Zimbabwean troops fighting on his government's behalf in the Congo would remain in place whatever the outcome of the poll.
The Zimbabwean contingent is generally held to be the only force capable of protecting Mr Kabila's regime from the rebel onslaught. The presence of Zimbabwean troops in the Congo has been a major election issue, as well as a substantial drain on Zimbabwe's tottering economy. The MDC has made clear that, should it come to power, one of its priorities would be to bring the Zimbabwean forces home.